ပြောပြန်ရင်လည်း တော်တော်ခက်အုံးမယ် ဧရာဝတီ | Ko Rohingya
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားက တိုင်းရင်းသား ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်ရတာလဲ။ ကြည့်လဲလုပ်ပါအုန်း ဧရာဝတီ။ ထိုင်းက ရှမ်းတွေကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလို့ ခေါ်လို့ ရမှာလား။
လူတွေက ပြောပြန်ရင်လည်း တော်တော်ခက်အုန်းမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုပ်ရှားတယ်၊ ရပ်တည်တယ်ဆိုရင် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်။ စစ်ခွေး မီဒီယာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ပါ။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော့ မလုပ်နဲ့။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အချင်းချင်းမို့ တိုင်းရင်းသား တန်းပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဗုဒ္ဒဘာသာမှန်သမျှ မည်သူမဆို မြန်မာပြည်မှာ လာရောက် အခြေချ နေထိုင်နိုင်ကြောင်း၊ လယ်နှစ်ဧကနဲ့ အိမ်တစ်လုံး အလကားပေးမယ်ဆိုတာ တရားဝင်ကြေညာလိုက်။
၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအရ နှစ်နိုင်ငံ Citizen ခံယူလို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတဲ့သူဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အလိုအလျောက် ဥပဒေအရ ပြတ်စဲသွားပြီ။ အဲဒီသူဟာ ဗမာပြည်ကို ၀င်ချင်ရင် ဗီဇာလိုတယ်။ ဗီဇာမဲ့ ခိုးဝင်ရင် ကျူးကျော်တာပဲ။ ကျူးကျော်တဲ့သူတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တရားဥပဒေအရ အရေးယူရမှာပဲ။ ဘာသာ၊ လူမျိုး ခွဲခြားလို့မရဘူး။ နိုင်ငံမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဗမာနွယ်ဖွားတွေ ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုး စဉ်းစားသင့်တယ်။ အခု ရခိုင်ကို ၀င်လာတဲ့သူတွေက နိုင်ငံမဲ့တွေ မဟုတ်ဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား မော့ဂ်ဘင်္ဂလီရခိုင်တွေပဲ။ ဒီကိစ္စက ပေါ့ပေါ့သေးသေး ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ ဒါကို မီဒီယာတွေက မျှမျှတတနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား တင်ပြရမယ်။ မီးမောင်းထိုးပြရမယ်။
This entry was posted on February 13, 2013, in ဖဘမှတ်ချက်များ and tagged ချမ်းမြေ့, ဖဘမှတ်ချက်များ, ရခိုင်, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သမိုင်း, ဧရာဝတီ, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဂျိုးမြစ်အား အမြီးလှန်ချိုးခြင်း
၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာ့ထုတ်ကုန်များ →